Ma leeyihiin damiir masuuuliyiintaa maalka qaranka ka samaystay jeebkana gacanta ma u galin karaan dadka abaartu hayso
(Hadhwanaagnews) Friday, November 04, 2016 02:41:02
Waa qormo iftiiminaysa 4 xubnood oo jeebkoodu buuxo oo haddana deegaamadoodii oo abaari hayso aan gacanta u gali karin
Waxa dalka Somaliland goboladiisa bari laga dayrinayaa in ay ku dhufatay abaar balaadhan oo saaayn weyn ku yeelatay deegaano ay ka mid yihiin kuwo ay ka soo jeedaan xubno wasiiro ka ah xukumada Axmed Siilaanyo iyo kuwo dhwaan uun ka tagay.
Deegaanadaaas ay saamaynta weyn ay ku hayso abaartu ayaa waxa wasiirada ka soo jeedaa ay yihiin kuwa ugu dhaqaalaha ama hantida ugu badan ka yeeshay xilalalka ay hayaan ama ay soo qabteen.
Tusaale ahaan wasiiradaas deegaamada ay abaaruhu ku dhubteen sanadkan ka soo jeeda waxa ka mid ah kuwa ugu
Bal aynu mid mid u taabano:
Xuseen Cabdi Ducaale, waa wasiirka Wasaarada Macdanta oo hela lacag xadhaafa ah oo ka soo gasha dhofiinta khayraadka macdaneed ee Somaliland, siiba waxa uu ka helaa dakhli toos loogi weeciyo oo ka soo gala buurta Siimoodiee gobolka Awdal oo u ah irmaan aan ka gudhin, cidina ayna kala gaawan. oo shirkad Shiine ah ay macdan qaali ah kala baxdo, isla markaana xisaabaad ama akaano uu ku lee yahay dalka dibadiisa loogu shubo lacag hadda is biirsatay., cidda wax ka soo gaadhaana waa wasiirada maaliyada oo la og weecsashaa lacagtaa iyo marwaa madaxweyne Siilaanyo oo iyaduna qaybteeda loo gooyo.
Haddii Xuseen Cabdi Ducaale go'aansado in uu damiir yeesho oo lacagta uu qaranka ka sameeyey fara guudkood dib ugu soo celiyo waxa uu ugu yaraan gaadhsiin karaa dadka abaaruhu ku habsadeen sida ilo xogogaal u ah xisaabaadkiisu sheegeen ugu yaraan laba milayn oo Doolar waayo lacagta uu hayo ayaa ah mid intaa ka badan ugu yaraan afar jeer. Laakiiin su'aashu waxa ay tahay damiirkaa ma leeyahay mar haddii uu markii horeba umada ka weecsanayey lacag kafayn kari lahayd dadkaa abaaruhu hayaan xili horeba.Lakiin waxa uu dadka ku siraa waa in uu meelo fagaaraha ah ka yidhaa waxaan bixinayaa kun Doolar, sida dhawaan dugsi deegaankuu ka soo jeedo oo baahi badan laga sheegay xafladii loo qabtay dhisme yar oo skuul ah oo bulshaada xukumadu ugu faanaysay, balse adeegaydii aas aasiga ahaa aan lahayn.
Maxamuud Cabdi Xaashi, waa wasiirka Wasaarada Madaxtooyada Somaliland, waana wasiir safka hore kaga jira wasiirada qaranka Somaliland saani uga weecsada hantida lacageed ee awooda u yeesheen in ay jeebkooda kala xisoon hantida umada.
Maxamuud Cabid Xaashi weaxa uu intii aanu noqon wasiirka Madaxtooyada horeba malaayiin uga urursaday wasaarada Duulista iyo Hawada oo mashruucii ugu weynaa ee Somaliland abid hesho oo 15 milyan ah uu wasaladiisa ka goosto, qarankana u dhabdhabo garoon diyaaradeed oo aanay galin lacagtoo 15 milyan ahayd ee dawlad Kuwait ku deeqday, balse qaab farsamo looga faaidaystay. Maxamuud Cabdi Xaashi waxa intaa u dheerayd lacagta laga qaado shirkadaha diyaaradaha iyo dadka ka soo daga oo lacag ugu yaraan qofkii lixdan doolaar laga qaado iyo iibkii dhismihii wasaarada duulista iyo hawda ee ka soo horjeeday Bar Hargeysa oo lacag 800 oo kun oo lacag doolar cadaan ah uu ku xaraashay, taas oo ay isaga iyo qoyska madaxtooyadu qaydhiinka ku kala qaybsadeen, dhismaha cusub ee wasaarada ee garoonka u dhowna laga dhisay lacagtaa Kuwatit ku deegqay.
Marka laga yimaad wixii uu gacanta ka galiyey marwo Aamina -waris , xaaska Madaxweyne Siilaanyo oo la sheegay in ay qayb ku lahayd in ay lacagta garoonka diyaaradha laga soo gaadhsiyo, inta kale wasa uu u farsamaysan jiray qaab uu ku weecsado. Taas oo u suurto galisay in uu maanta malaayiin doolar dhigto dalka dibadiisa iyo gudihiisaba. Lacgtaa aynu sheegayno waxa uu qaybo ka mid ah guryo kaga ibsaday magaaladii uu ka deganaa dalka UK ee Birmingham, halkaas oo hadda ay dhibaato kaga furantay oo dalwada dalkaas UK ay xisaabaadkisa ogatay, cashuur laga doonayo iyo khiyaamo xaaskiia lagu qabtay oo la xidhiidha qaadashada lacagta dadka sabooblka ah loogu talo galay ee la yidhaa Caydha iyo iyadoo wadata baabuur qaali ah.
Haddii Maxamuud Cabdi Xaashi is-qanjiidhiyo oo waliba inta u diir naxo is yidhaa maanta u gurmo dadkaa abaartu ku dhufatay ee deegaamada uu ku abtirsadao ee bariga Somaliland, waxa u suurto galaysa in qurbeje jooga deegaanadaasi aanay isba hawlin oo uu kaligii ku fulan yahay, laakiin damiirkaa ma lee yahay, mase ogol yahay in waxa uu markii horeba umada ka dhacay u celiyo?
Waxa hubaal ah in uu afka dambaska u marsanayo, bulshadana la soo hor istaagi doono baaq uu u jeedinayo oo uu odhan doono dadkoow soo gurmada. Sida awgeed waa waxba ha ka sugina.
Baashe Cunar, dadkuna u yaqaanaan Baashe Moorgan oo uu ku kasbaday xidid-ku-xoolowga uu ku tijaaray. Baashe Morgan waa wiilka uu madaxweyne Siilaanyo sodoga u yahay oo ka mid ah masuuliyiinta xukumada Siilaanyo ee hantida yeeshay. Baashe Moorgan waxa uu hantida yeeshay intii aan looba magacaabin xilka wakiilnimo ee Somaliland uga wakiilka yahay dalka Imaaraadka Carabta. Waxa lagu qiyaasaa in uu yahay ninka ugu maalka badan masuuliyiinta xukumada Siiilaanyo. Waa shaqsiga kali ah ee awooda u leh in wixii xukumada dibada ka soo iibsanayso isaga la mariyo, si uu u dilaalo. Dilaalistaas iyo waxa isbadaba marin waxa u dheer, waxa uu dalka ku lee yahay shirkad faalso ah oo uu ka dhex furtay Hay'ada Haamaha Shidaalka Berbera. Shirkadaasi waa mid ku magacaaban in ay eegto tayada shidaalka dalka la keeno. hase ahaatee waxa la eegaa ma jirto ee shirkadaha shidaalka ayaa qadar lacag ah calaa foosto loogu shubaa akaawn ama xisaabeed uu ku lee yahay shirkada xawaaladeed oo kuwa dalka ah. Lacagta halkaa ka soo gashay ama ilaa hadda ka soo gashaa waxay gurmada u gali kartaa oo biyo dhaamis iyo dhiini u noqon kartaa bulshada abaaraysan ee deegaamada uu ku abtirsadom marka kuwa kaleba laga yimaad.
Baashe waxa kale oo yeeshay hanti guryo ah oo malaayiin ah oo ku kala yaal min Dubai ilaa London, sida xaafada qaaliga ah ee London ku taal oo uu wakhti aan sidaa u sii weynayn ka ibsaday guri la sheegay in laga siiyey hal milyan oo lacagta Ingiriiska ah. Ka waran haddii uu gurigaa u xaraasho umaddiisa uu markii horeba ka weecsaday lacagtoodii?
Uma badna, waayo Baashe Moorgan wali ma odhan haaka, abaarta dhacaysa iyo gurmadkeedana waxa uu damiirkiisu siinayaa inay u gumadaan bulshada Somaliland ee sidiisa aan hantida boobin iyo in la gaadhsiiyo kiintalada daqiiqda iyo bariiska ah ee dawlada Turkigu ugu deegqay, kuwaas oo haddana xukumada odayga u sodoga ahi hogaamiyo ay umadda ugu mahad sheegato. Alle dareen wadaniyadeed oo daacada ha galiyo, intase ducada la inaga aqbalayo waxa hubaal ah in bulshada abaaraysan ayna shilin ka helayn.
Xirsi Cali Xaaji Xasan, waa wasiirkii Wasaarad Madaxtooyada ee hore, imikana waa 'Hogaamiyaha Xisbiga Waddani' ee cusub. Xirsi waa shaqsi caan ku noqday awoodii uu helay iyo sirtii uu ogaaday ee hogaanka qaranka Somaliland. Awoodii uu laha waxay u suurto galisay in uu kaga faa'idaysto urursiga hantida lacageed ee umada, taas oo u maanta qayb ahaan is lee yahay wixii uu kala galbaday xukumadii umadu aamintay in uu maanta ku darbiyo xisbiga hogaanka sawaaban loo dhiibay ee Waddani.
Xirsi waxa lagu qiyaasayaa in uu lacag ahaan haysto ugu yaraan 4 milyan oo doolar, hase ahaatee sidii faanku ula galay waxa uu inoo sheegay in uu yahay "40 jir 40 milyan haysta" Lacagtii badnayd ee madaxtooyada maamulkeeda iyo lacagtii wadada Ceerigaabo oo midna aan la xisaabin wxa uu xukuamda Siilaanyo kala galbaday lacago haddii uu maanta Alle dartiiba u soo celiyo gurmad weyn loogu gali karo dadka abaaruhu hayaan ee deegaamda isna ku abtirsado ee Bariga Somaliland. Hase ahaatee siyaasada cusub iyo dagaalka uu kula jiro xibigii iyo xukumadii hantida ka samaystay, ee uu khibrada iyo waayo aragnimada ka helay, damiirkiisu ma siinayo in uu jeebka gacanta inta uu galiyo yidhaa intaas ayaan gaadhsiinayaa dadka abaartu hayso, haddii uu is yidhaana waxa uu inoo sheegi doonaa in xisbiga Waddani dadkaa abaaruhu hayaan ay xisbi ahaan u gurmanayaan, hadda ogow waa lacagtii uu markii horeba umada ka leexsadaye.
Xirsi waxa la sheegaa in aanu lacago badab dibada dhigan, laakiin waxa uu dhigtay dalka gudihiisa, sida isagoo dad ganacsato ah u dhiibtay. Waxase uu damiir ahaan la mid yahay kuwo kor ku xusan ee wali ay tuumbadu ugu jirto ee saacadaa aynu hadlayno umadda gurmadka u baahan dhagah ka furaystay ee adigoo kale doonaya in aad jeebka gacanta galiso, tay umadda ka leexsadeena u qarsoonaato.
Marka la soo xooriyo arinka lacageed ee xubnahaasi jeebka ugu jira, waxa la isku raacay in ay hayaan ugu yaraanan isku geyntiin 20 Milyan oo Doolar iyo aduun guroyo ay gaiyeen oo intaa ku dhow, ka waran haddii ay 2 milyan dib ugu celiyaan bulshadaa abaaraysan? Ha ka sugin!
Bulshadu ha ogaato in haddii 4taa aan kor ku soo sheegnay ay kaligood dib ugu soo celiyaan lacagta ay umadda ka farsamaysteen aan loo baahdeen qaylo dhaan la gaadhsiiyo qurbejog iyo bulshada dalka joogta midna. Haddii marwo Aamina-waris iyo saaxiibadeed Samsam Cabdi Aadan iyo kuwo kalena sidaas iyaguna yeeli lahaayeen oo umadda waxa u soo celin lahaayeen, gurmad kale looma baahdeen.
Allah xalaasha ha garansiiyo oo dareen ay ugu damqadaan dadkoodana ha galiyo.
Xusuus: Hadhwanaagnews uma hayso cadaawad gooniya xubnaha kor ku xusan, hase ahaatee waa arin mudan in la sheego, tooshkana kagu shido masuuliyiinta umadda booba ama boobaya xili umadduna ku jirto xaalad adag oo dareen qof lihi ku daawan karin, kana aamusi karin. Sidoo kalena waa waajib saxaafadeed in la tilmaamo masuuliyiinta ka danaysta xilalka qaranka ee lagu aaminay.